एमाले नेताहरूलाई मीनेन्द्र रिजालले भने- हामीसँग किन कुण्ठा पोख्नुहुन्छ? :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
एमाले नेताहरूलाई मीनेन्द्र रिजालले भने- हामीसँग किन कुण्ठा पोख्नुहुन्छ?
काठमाडौं, जेठ १३
नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनेन्द्र रिजालले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका नेताहरूलाई कुण्ठा नपोख्न आग्रह गरेका छन्।
स्थानीय चुनावको परिणाम स्वीकार गर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन्।
‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता (केपी शर्मा ओली) ले सिट संख्यामा हारे पनि लोकप्रिय मत एमालेकै बढी छ भन्नुभयो। त्यस्तै चुनावका बेला अर्को पनि सुनिन्थ्यो- कांग्रेस एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर अरूसँग लाग्यो भन्नुहुन्थ्यो,’ उनले आज संसदमा भने, ‘अघिल्लो संसदीय चुनावमा सय सिटमा पनि लड्न नसक्ने एमाले भनेर हामीले भनिदिएको भए हुन्थ्यो। माओवादीको बुई चढेर चुनाव लड्न आएको भन्दिए हुन्थ्यो भनिएन हामीले।’
०७४ को चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसले एमालेलेभन्दा धेरै मत पाएको स्मरण पनि उनले गराएका थिए।
‘प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पहिले चुनावमा ३५.७ प्रतिशत मत हामीले पाएका थियौं। एमालेले त ३०.७ प्रतिशत मत पाएको थियो। ५ प्रतिशतको फरक थियो। कहाँ गयो एमाले भन्दिए हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘कता खोज्ने एमाले भन्दिए हुन्थ्यो भनिएन हामीले। हामीले त्यति मत ल्याए पनि २३ सिट जित्यौं।’
एमाले-माओवादी सरकार बने पनि टिकाउन नसकेको उनले बताए।
‘सरकार बन्यो टिकाउन सक्नुभएन। हामीले गरेर हो त? जसको बुई चढेर चुनावमा सफलता प्राप्त गर्नुभयो उनीहरूलाई सम्मान गर्न नसकेपछि के पो टिक्थ्यो,’ उनले भने, ‘आफ्नै पार्टी टिकाउन सक्नुभएन हामीलाई भन्नुहुन्छ। त्यो हामीलाई भनिरहनुपरेन। कमसेकम आफ्नो अनुहार र रूप हेरे हुन्छ किन कुण्ठा हामीसँग पोख्ने पोख्ने। हाम्रा कारणले केही भएको होइन। यसपालिको हारलाई पनि स्वीकार गर्नुस् अब आउने चुनाव तयारी गर्न सजिलो हुन्छ।’
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ १३, २०७९, ०६:१०:००
छानविन समितिको निष्कर्ष- विमला वलीले मर्यादा भुलेर अरूको घरमा झगडा गर्न जानू गलत
कमरेड शब्द मलाई असाध्यै मनपर्छः कमल थापा (भिडिओ)
कृषि मन्त्रीप्रति लक्षित गर्दै ओलीले भने- झण्डा हल्लाऊ भनेर मन्त्री बनाएको कि मल देऊ भनेर? (भिडिओ)
कृषि प्रधान देशमै ४९ अर्बको खाद्यान्न आयात भयो, यो अशोभनीय स्थिति हो: ओली
मुख्यमन्त्री हेरफेरको विषयमा शीर्ष नेताहरूको बैठकले निर्णय लिनुपर्छ: एकीकृत समाजवादी
नागरिकको विवरण संकलन कार्य प्रभावकारी बनाऔं: गृहमन्त्री खाण